ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်မည် RayHaber | raillynews
[08 / 04 / 2020] Kovid-19 ဖြစ်ပွားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာတွင်ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေသည်	06 တူရကီ
[08 / 04 / 2020] Coronary virus ကပ်ရောဂါကို Hayat Eve Sığar Mobile Application ဖြင့်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်	06 တူရကီ
[08 / 04 / 2020] ၁၁၅၀ TL ငှားရမ်းမှုပြည်နယ်အိမ်ငှားများအားကူညီခြင်း!	06 တူရကီ
[08 / 04 / 2020] အခမဲ့ခွင့်ရက်ခွင့်ရှိသူများထံလစာအထောက်အပံ့ရောက်ရှိနေပြီ	06 တူရကီ
[08 / 04 / 2020] IMM သိပ္ပံကော်မတီသည် Covid ကိုတိုက်ဖျက်ရန်အဆိုပြုချက်များကိုကြေငြာခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာလောကASIA မှ90 ဆိုက်ပရပ်စ်ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်မည်
15 / 02 / 2020 90 ဆိုက်ပရပ်စ်, ASIA မှ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, မော်တော်ယာဉ်
TRNC အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီး Faiz Sucuoğluသည်Günsel၏ပထမဆုံးပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ကားကိုထုတ်လုပ်မည့်စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်။ ဒေါက်တာ သူသည် aboutrfan Günselထံမှသတင်းများရရှိခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးဌာန၏အချက်အလက်များအရ frfan Günselမှသူ၏အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း ၁၀,၀၀၀ ကျော်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် B10 ထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စက်ရုံတွင်စတင်မည်၊ သူ၏အရင်းအမြစ်များဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားပြီးသူ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ကားအစီး ၂၀၀၀ ဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ သူက ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ယာဉ်အစီး ၂၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Sucuoğluက“ ကျနော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံကဖန်တီးတဲ့အလုပ်အကိုင်လိုအရေးကြီးတဲ့နောက်ကိစ္စတစ်ခုကမော်တော်ယာဉ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတဲ့လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်သူတွေကိုပေးမယ့်အလုပ်အကိုင်ပဲဆိုတာပြတယ်။ အင်ဂျင်နီယာများမှဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံမှကုမ္ပဏီ ၈၀၀ နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခြင်းနှင့်အတူဤကားကိုထုတ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်သည်။ သူ၏လေ့လာမှုများအရထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုမည့်စက်ရုံများနှင့်မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်မည်နှင့်အတူထောင်ပေါင်းများစွာသောကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်များသည်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ပညာရှင်များအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရကြလိမ့်မည်၊ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
Bursa တွင်တည်ထောင်မည့်ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘီလီယံ ၂၂ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်
Bursa Gemlik တွင်ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံတည်ထောင်မည်
စီးရီးထုတ်လုပ်မှုကျော်၏TÜDEMSAŞ Talns Ore Wagon အမျိုးအစား (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Kovid-19 ကို Pandemic Isolation Tracking Project မှကာကွယ်ပေးမည်
EGO Bus ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ကာတာနိုင်ငံသားများသည် EGO ဘတ်စ်ကားများဖြင့်ကာရန်ဇုန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
Coronary Virus တိုင်းတာမှုများအတွက် TCDD mirzmir Port Authority မှကျေးဇူးတင်ပါသည်
Coronary virus ကပ်ရောဂါကို Hayat Eve Sığar Mobile Application ဖြင့်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်
၁၁၅၀ TL ငှားရမ်းမှုပြည်နယ်အိမ်ငှားများအားကူညီခြင်း!
TCDD အံ့အားသင့်ဖွယ် Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း AYGM သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်
TÜBİTAK SAGE 34 စီမံကိန်း ၀ န်ထမ်းကိုခန့်အပ်မည်
ပိုးသတ်ဆေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို Alanya တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
Red Light ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကို Mersin တွင်အသုံးပြုသည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ကျန်းမာရေးကို ဦး စား ပေး၍ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောလိုင်းများကိုထပ်မံဖြည့်တင်းသည်
အထူးဝန်ဆောင်မှုသည် Izmir ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံခွဲဝေပေးထားပါသည်
အများပြည်သူဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးမည့်ရထားလမ်းကြောင်းများကိုဆုံးဖြတ်သည်
ဆမ်ဆန် Sivas မီးရထားသည်ယခုလအတွင်းကုန်တင်ကားများဖွင့်လှစ်သွားမည်